Home Wararka Wararkii ugu dambeeyay Ciidamo gadood ka sameeyay Beledweyne
Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan qeybo kamid ah waxaa xalay lagu arkay Ciidamo sheegay inay ka gadoodsan yihiin in Shaqsiyaad gaar ah loo xiro kuraasta Golaha Shacabka ee taalla Beledweyne.
Ciidamada oo ku hubeysnaa hubka noocyadiisa kala duwan ayaa lagu arkay afaafka hore ee Xarunta lamagalaay ee Magaalada Beledweyne, iyaga oo sheegay in marnaba aan la aqbali karin in kursiga Hop#030 loo xiro Daahir Amiin Jeesoow oo kursigaan dhowrkii sano ee la soo dhaafay ku fadhiya.
Qaar kamid ah horjoogayaasha Ciidamadaan oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay doonayaan in tartan furan oo cid kasta ka qeyb geli karto laga dhigo Kursiga uu ku fadhiyo Daahir Amiin jeesoow, isla markaana marnaba aqbaleyn in Shaqsi loo xiro.
Waxaa ay sheegeen hadii la isku dayo in shaqsi loo xiro kuraasta Golaha Shacabka ay dagaalami doonaan, iyaga oo baaq u diray Madaxweynaha Hir-Shabeelle iyo kuxigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed.
Madaxweynaha Hir-Shabeelle oo ka jawaabayay cabashada Ciidamada ayaa la kulmay musharrixiinta Golaha shacabka, isaga oo sheegay in shaqsi gaar ah aan loo xiri doonin kuraasta Golaha Shacabka.
Previous articleFarmaajo oo bedelay magacacii saxda ahaa ee Jamhuuriyadda
Next articleShariif Xasan oo faah faahiyay safarkii Maanta laga hor-istaagay
Qoor Qoor oo la soo deristay cabsi, bilaabayna dib u heshiisiin...
Ubax Tahliil oo xaal ka ku xunyahay & Doorashada oo hakad...